आत्मीकी दियोहरु निभ्दैछन् ! – सिमोन राई | Nepali Christians
आत्मीकी दियोहरु निभ्दैछन् ! – सिमोन राई
July 7, 2015 10:42 am by: Admin Category: Sermons A+ / A-
पावलले भनेका छन् “तपाईंहरु आफ्ना निम्ति र आफ्नो समस्त बगालको निम्ति सावधान रहनुहोस् । पवित्र आत्माले तापाईंहरुलाई बगालका जिम्मावाल बनाउनुभएको हुनाले उहाँले आफ्नै रगतले किन्नुभएको परमेश्वरका मण्डलीको हेरचाहा तपाईंहरु गर्नुहोस् । किनभने मलाई थाहा छ कि म गएपछि डरलाग्दा ब्वाँसाहरु तिमीहरुका माझमा पस्नेछन्, जसले बगाललाई बाँकी राख्नेछैनन् ।” (प्रेरित २०:२८,२९)
आजको मण्डलीमा त्यस्ता धेरै ब्वाँसाहरु पसि सकेका छन् । प्रत्येक भेडाहरुका आत्मामा कम्जोर बनाई रहेका छन् । जसले गर्दा परमेश्वरको ब्यवस्थालाई भन्दा संसारिक आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकता दिईदै छ । त्यस्ता डरलाग्दा ब्वाँसाहरुले आज एउटा भोली अर्को पर्सि अर्कै गर्दै दिन–दिनै प्रभु येशूले अमुल्य रगत बगाएर किनिएका भेडाहरु हराउदै जाँदा बगालका जिम्मावल गोठालाहरु भने आफ्नो पद र ओहदा खोज्दै ठिक्क भएको छ । बगाललाई आवश्यक पर्ने आत्मीकी खुरागहरु पस्किन सकेका छैनन् । आत्मीकी शरीरलाई आवश्यक पर्ने ताजा भोजन जुटाउन सकेका छैनन् । जसो–तसो आत्म विश्वास जुटाएर खडा भएका व्यक्ति पनि जिम्मावालको चरित्र र व्यवहार देखेर पानी नपाएका फुल चर्को घाममा ओईलाए झै भएको छ ।
आत्मीकी दियोहरु निभ्दैछन् ! – सिमोन राई Reviewed by Admin on Jul 07 . दियो भनेको त्यो हो जसले आफु रित्तिएर अरुलाई प्रकाश दिने काम गर्छ । अन्धकारमा भौतारी रहेकाहरुलाई बाटो देखाउने काम गर्छ । जसले गर्दा बाटो बिराई रहेकाहरुका निम्ति दियो भनेको त्यो हो जसले आफु रित्तिएर अरुलाई प्रकाश दिने काम गर्छ । अन्धकारमा भौतारी रहेकाहरुलाई बाटो देखाउने काम गर्छ । जसले गर्दा बाटो बिराई रहेकाहरुका निम्ति Rating: 0
शैतानले बिश्वासीहरुलाई कसरी आफ्नु अ...क्रिश्चियनहरु फुटिराख्ने कि जुटेर अ...